မာရီယာဟိုဆေး Roldan | | ကိုယ်ပိုင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု, ပညာရေး
လူသားအားလုံးမှာတီထွင်ဖန်တီးနိုင်စွမ်းရှိကြတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါတို့အားလုံးကအဲဒါကိုဘယ်လိုတိုးတက်အောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတာမသိကြဘူး၊ ပြီးတော့ဒီအပိုင်းကိုအိပ်ပျော်အောင်ဖန်တီးနိုင်တဲ့အတားအဆီးတွေရဲ့ရှုပ်ထွေးမှုတွေထဲကျသွားနိုင်တယ်။ သင်၏ဖန်တီးမှုစွမ်းရည်ကိုမြှင့်တင်ခြင်းမရှိပါကသင်ကိုယ်တိုင်၏အကောင်းဆုံးအပိုင်းကိုဖော်ပြနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနှင့်လုပ်ငန်းခွင်အသက်တာတွင်စျေးနှုန်းမြင့်မားနိုင်သည်။
ဤအကြောင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်အားအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနိုင်သည့်တီထွင်ဖန်တီးမှုဆိုင်ရာအတားအဆီးအချို့ကိုသင့်အားမပြောပြဘဲပြောပြလိမ့်မည်။ အတားအဆီးများကွဲပြားနိုင်သည်၊ ၎င်းသည်သင်၏ဘ ၀ နှင့်မည်သို့သင့်အပေါ်ထိုသူအပေါ်သက်ရောက်မှုအပေါ်မူတည်လိမ့်မည်။ သို့သော်အထူးသဖြင့်ယင်းတို့ကိုသိခြင်းကသင့်ဘဝတွင်သင်၌ရှိသည့်အရာများကိုအသိအမှတ်ပြုရန်ကူညီနိုင်သည်။
အဖွဲ့အစည်းအများစုသည်တီထွင်ဖန်တီးမှု၊ အတွေးအမြင်နှင့်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုတို့ကိုအဟန့်အတားဖြစ်စေသည်။ အချို့မှာသိသာထင်ရှားပြီးအချို့မှာမူ ပို၍ သိမ်မွေ့သည်။ အဖွဲ့အစည်းခေါင်းဆောင်မှုသဘောထားများနှင့်သဘောထားအမြင်များမှအတားအဆီးအချို့ပေါ်ပေါက်လာသည်။ အခြားသူများကိုအဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းပုံမှသို့မဟုတ်ပင်န်ထမ်းသူတို့ကိုယ်သူတို့မှလာနေစဉ်။
ဤအတားအဆီးများသည်အဖွဲ့အစည်း၏ဖန်တီးမှုဆိုင်ရာဖြစ်နိုင်ခြေများကိုဖယ်ရှားပစ်သောကြောင့်တီထွင်ဖန်တီးမှုနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုအတွက်အတားအဆီးများကိုဖော်ထုတ်ဖယ်ရှားရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ အတားအဆီးများရှိနေကြောင်းဖော်ထုတ်ခြင်း၊ အသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့်အသိအမှတ်ပြုခြင်းအားဖြင့်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုသည်ရိုးရှင်းသောနည်းဗျူဟာများကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုသည်ဘုံအတားအဆီးများကိုကျော်လွှားနိုင်ပြီးအတွေးအမြင်ကိုပိုမို ဦး တည်နိုင်သည်။
မင်းဟာထူးခြားတဲ့အရာတစ်ခုကိုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ စိတ်ကူးအသစ်၊ ထူးခြားတဲ့ဖြေရှင်းနည်း။ ရွယ်တူချင်းအစား၊ သင်ထင်တယ်လိုက်တယ် အဘယ်ကြောင့်? အလွန်ရိုးရှင်းပါသည် - ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး နှောက်သည်မသိသောသူများအတွက်သိသောအဖြေများကိုအလိုအလျောက်ပိုနှစ်သက်သည်။ ၎င်းသည်ဖြေရှင်းချက်အသစ်များကိုအဆက်မပြတ်ရှာဖွေခြင်းထက် ပို၍ မြန်သည်။
ဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတားအဆီးကိုတီထွင်ဖန်တီးနိုင်စွမ်းနဲ့ဆန်းသစ်တီထွင်မှုအတွက်သင်ကိုယ်တိုင်စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။ အီးမေးလ်ပရိုဂရမ်တစ်ခု၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းအားလုံးကိုအချိန်များစွာအကုန်အကျခံပြီးနောက်၊ မည်သည့်မီနူးပစ္စည်းများမည်သည့်နေရာတွင်ရှာရမည်ကိုသင်နောက်ဆုံးတွင်သင်ရှာဖွေပြီးနောက်၊ အီးမေးလ်များကိုမည်သို့ခွဲထုတ်ရမည်ကိုနောက်ဆုံးတွင်သင်ရှာဖွေပြီးနောက်၊ အောက်ပါစာတိုပေါ်လာမည်။ ဗားရှင်း ၃.၁ ကိုကူးယူပါ။ အခု အသုံးပြုသူအသစ်မျက်နှာပြင်။ " သင်ဘယ်လိုတုံ့ပြန်သလဲ
"အင်း၊ ကောင်းတာပေါ့၊ ငါ user interface ဟောင်းနဲ့ငြီးငွေ့သွားပြီ!"
သင်တတိယရွေးချယ်မှုကိုလောင်းနိုင်သည်။ ၎င်းသည်တီထွင်ဖန်တီးမှုနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုအတွက်ပထမဆုံးအတားအဆီးဖြစ်သည်။ အလေ့အထအတားအဆီးသည်စျေးကွက်တွင်တီထွင်ဆန်းသစ်သောဖြေရှင်းနည်းများကိုအစပိုင်းတွင်ထင်ထားခြင်းထက် ပိုမို၍ တည်ဆောက်ရန်ခက်ခဲသောအကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ စားသုံးသူများသည်လည်းသူတို့၏စိတ်ထဲတွင်ဆန်းသစ်သောအတားအဆီးများရှိသည်။
မဖြစ်နိုင်ဘူး! သင့်မှာတစ်နည်းနည်းနဲ့ထူးဆန်းနေတဲ့အသံဒါမှမဟုတ်ရောက်ရှိလို့မရတဲ့အသံတစ်ခုရလာတဲ့အခါမှာမင်းရဲ့ခေါင်းကဘာကြောင့်မလုပ်နိုင်တာလဲဆိုတာကိုထောင်ချီပါတယ်။ တီထွင်ဖန်တီးမှုနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုအတွက်ဒီအတားအဆီးကစိတ်ကူးဖန်တီးမှုနှင့်အတွေးအခေါ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်စဉ်ဆက်မပြတ်ရှိနေသည်။ "အရမ်းစျေးကြီးတယ်" "ကျွန်တော်တို့မှာ ၀ န်ထမ်းကောင်းတွေမရှိဘူး။ " ဒါကမဖြစ်နိုင်ဘူး။
ကန့်ကွက်မှုများသည်တရားမမျှတပါ။ ပထမဆုံးအကြံဥာဏ်ကနေအောင်မြင်တဲ့ဆန်းသစ်တီထွင်မှုဆီကိုသွားတဲ့လမ်းကြောင်းကတကယ်ကိုစျေးကြီးတယ်။ လိုအပ်သောအရည်အချင်းကိုကုမ္ပဏီတွင်မတွေ့ရပါ။ အကြံဥာဏ်ကိုရှိပြီးသားတည်ဆောက်မှုအတွင်းတွင်အကောင်အထည်မဖော်နိုင်ပါ။ ယခုမူကားအဘယ်သို့ဖြစ်သနည်း။ သင်စီးပွားရေးသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆန်းသစ်တီထွင်မှုကိုအောင်မြင်စွာအကောင်အထည်ဖော်လိုပါကဤအတားအဆီးကိုကျော်လွှားရမည်။ သငျသညျအရေးယူမှုအစီအစဉ်ကိုဖန်တီးရန်ရှိသည်လိမ့်မယ်!
လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကကုမ္ပဏီတခုသည်စက်မှုအင်ဂျင်နီယာကုမ္ပဏီမှအင်ဂျင်နီယာများကိုတွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့သည်။ သူတို့ဟာသိသိသာသာစျေးသက်သက်သာသာသာတဲ့စနစ်တစ်ခုအတွက်စိတ်ကူးများကိုတီထွင်ခဲ့ကြရတယ်။ သို့သော်မည်သည့်အတွေးအခေါ်ပေါ်ပေါက်လာစေကာမူအင်ဂျင်နီယာများက“ နည်းပညာပိုင်းအရမဖြစ်နိုင်ဘူး” ဟူ၍ ပြောခဲ့သည်။ သူတို့ဟာသုံးနှစ်ကြိုးစားခဲ့တယ်၊ နောက်ဆုံးတွင်ကုမ္ပဏီ၏စီမံခန့်ခွဲမှုကထိုတာ ၀ န်ကိုပြင်ပကုမ္ပဏီတစ်ခုသို့လွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်။ သုံးလကြာပြီးတဲ့နောက်ဒီကိရိယာကိုဈေးကွက်ထဲဖြန့်ချိဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ။
ဒါဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့တာလဲ။ စီမံခန့်ခွဲမှုသည်ဗဟုသုတအတားအဆီး၏အတိုင်းအတာကိုလျှော့တွက်ခဲ့သည်။ ပါ ၀ င်ပတ်သက်တဲ့အင်ဂျင်နီယာတွေကဒီကိရိယာကိုတီထွင်ဖို့အတွက်လိုအပ်တာအားလုံးကိုသူတို့သိတယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်။ ကံမကောင်းစွာပဲသူတို့ဟာအချက်တစ်ချက်ကိုလွဲချော်သွားတယ်။ သူတို့မသိတာကိုသူတို့မသိခဲ့ဘူး။ သူတို့သတိမထားမိခဲ့ကြသောကြောင့်သူတို့တီထွင်ဆန်းသစ်မှုကိုမောင်းနှင်ရန်လိုအပ်သည်ကိုသူတို့မသိခဲ့ပါ။ အသိပညာအတားအဆီးသည်တီထွင်ဖန်တီးမှုနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုအတွက်အဓိကအတားအဆီးတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်၏ဖန်တီးမှုစွမ်းရည်သည်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအတွေ့အကြုံနှင့်ဗဟုသုတများစွာဖြင့်လွှမ်းမိုးနေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ မင်းရဲ့ဇာတ်ကောင်စရိုက်တွေ၊
တီထွင်ဖန်တီးမှုနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုအတွက်ဤအတားအဆီးသည်အစောပိုင်းအဆင့်၌စတင်သည်။ ဆန်းသစ်တီထွင်မှုပုံစံဖြင့်စတင်စဉ်းစားခြင်းမပြုမီကလေးများအား“ မင်းဒါကိုမလုပ်နိုင်ဘူး” ဟုပြောကြသည်။ ဤအကြောင်းပြချက်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ပညာရေးဖြစ်သောကြောင့်သင်မပြုလုပ်သင့်ပါ။ "ဒါကငါတို့လုပ်နေတာမဟုတ်ပါဘူး။ " အသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းဘဝတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြီးပြည့်စုံသောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများရှိသော chameleons များဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ပတ်ဝန်းကျင်၏စည်းမျဉ်းများကိုလျင်မြန်စွာလိုက်လျောညီထွေစွာနေထိုင်သည်။
ကံမကောင်းစွာဖြင့်စုံလင်လွန်းခြင်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်သောအရာတစ်ခုမဟုတ်ပါ။ အရာရာတိုင်းကိုမှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်လိုခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်တီထွင်ဖန်တီးမှုနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုအတွက်အတားအဆီးများကိုသတိရှိရှိတီထွင်သည်။ ခွင့်မပြုနိုင်သည့်အရာများနှင့် ပတ်သက်၍ ခန့်မှန်းချက်များကိုအမြဲတစေပြုလုပ်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်စည်းမျဉ်းများကိုတမင်ချိုးဖောက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့်ဖြစ်နိုင်ခြေများမှကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်ဖယ်ထုတ်လိုက်သည်။
စည်းမျဉ်းအတားအဆီးသည်စျေးကွက်၏ဥပဒေများကဲ့သို့သောမမြင်ရသောဥပဒေများတွင်လည်းတက်ကြွစွာပါဝင်သည်။ "စျေးကွက်တစ်လမ်းတည်းဖြင့်အလုပ်လုပ်သည်။ " တစ်စုံတစ် ဦး ကစျေးကွက်၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုပြန်လည်သတ်မှတ်သည်အထိဤကြေညာချက်ကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုဖြစ်စဉ်ကို၎င်း၏ဆန်းသစ်တီထွင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုတွင်အလွန်တင်းကျပ်လွန်းပါကစည်းမျဉ်းအတားအဆီးကိုသက်ဝင်စေသည်။ ဆန်းသစ်တီထွင်မှုအဖွဲ့များသည်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုကိုယ်တိုင်ထက်စာလျှင်နောက်ခြေလှမ်း၏စည်းမျဉ်းများကိုလိုက်နာရန်ပိုမိုစိုးရိမ်ကြသည်။
တီထွင်ဖန်တီးမှုနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုတို့အတွက်ဤအတားအဆီးသည်ရှင်းလင်းပြတ်သားသောခေါင်းဆောင်မှုဟုမကြာခဏဝန်ခံလေ့ရှိကြသည်။ အစပိုင်းမှာတော့မန်နေဂျာတွေကသူတို့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားမှုနဲ့ကတိက ၀ တ်တွေကြောင့်လေးစားခံရတယ်။ အမှုအရာတစ်ချိန်ချိန်ပြောင်းလဲသွားသည်။ သို့သော်သူတို့သည်ခိုင်မာစွာသက်သေပြပြီးသောအရာများကိုစွဲကိုင်ထားကြသည်။ ဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲ
ချက်ချင်းကွာခြားချက်နီးကပ်လာသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်သင်၏ ဦး ခေါင်း၌ကွဲလွဲမှုအတားအဆီးကရပ်တန့်သွားသည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟာအမြဲတမ်းယုတ္တိရှိပြီးနားလည်နိုင်တဲ့ပုံကိုပြင်ပကမ္ဘာကိုတင်ပြလေ့ရှိပါတယ်။ ဆန့်ကျင်ပုံရသောအရာအားလုံးသည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အလွန်ကြီးမားသည်။ မနေ့ကကျွန်ုပ်တို့ဆန့်ကျင်ခဲ့သည်၊ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့မျက်နှာသာရနေကြပြီး၎င်းနှင့်မသက်မသာခံစားမိသည်။ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်စဉ်းစားတွေးခေါ်ဤအတူကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ » ကိုယ်ပိုင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု » တီထွင်ဖန်တီးမှုနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုအတွက်အတားအဆီးတွေကဘာတွေလဲ
ငါကလေးဘဝတွင်ရက်စက်မှုအေးစက်, သဘောတူကြသည်။ သူတို့တီထွင်ဖန်တီးမှုကိုကန့်သတ်ထားတယ်။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကလေးတွေမဟုတ်တော့ဘူး၊